ILoft entle enegaraji kunye ne-PARK VIEW
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguDavi
ILoft entle epholileyo embindini, imbonakalo entle, iWifi enefiber ebonakalayo evela eCopel, indawo yokupaka eyi-01 kwisakhiwo seemoto ezincinci neziphakathi.
I-studio icocekile, yanamhlanje, ihonjisiwe, kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko ukuze uhlale ukhululekile. Ifakwe, ngokukhanya kwendalo, ukuhamba kakuhle komoya, ibalcony enombono okhethekileyo wePasseio Público Park! Ilungele abo beza eCuritiba kukhenketho, abaphathi, ukwenza ishishini, abafundi, ukuzonwabisa.
Indawo esembindini Great ukuba ukwazi yonke umkhenkethi kunye neendawo zenkcubeko umdla intliziyo Curitiba, phambi kwendawo enhle Passeio Público (bawela nje isitalato, abo abakuthandayo izilwanyana nezityalo, ukuba phandle ndinyana izithuba aluhlaza enkulu; Ipaki kamasipala endala eCuritiba enemizila yokuhamba kunye nokunyotywa kwephenyane echibini, icinema yesitrato esihle, i-zoo), iindlela zebhayisekile, ibhloko enye ukusuka kwiCentro Cultural Teatro Guaíra edumileyo (eyona ndawo yemveli yemiboniso kunye nemiboniso eParaná), ibhloko enye ukusuka Praça Andrade, amanyathelo ambalwa ukusuka Federal University of Paraná (yeyokuqala Federal University of Brazil), Rua XV de Novembro (ezininzi iivenkile, snack bars kunye patisseries zibekwe kwesi sitrato), kufutshane nePaço da Liberdade ebekekileyo (ikhaya ukuya gallery kunye cafe emangalisayo) Kumbindi Historic kunye cafes zalo, nemivalo, zemidlalo kunye namaziko enkcubeko, nangeeCawa, mboniso nentle Largo da Ordem, phakathi kwabanye. Kufuphi nemarike, iikhemesti, iibhaka, iindawo zokutyela, iShopping Müller epheleleyo, kunye nalo lonke urhwebo olubonelelwa liziko kunye nendlela yalo esecaleni kwendlela, iindawo ezininzi zemidlalo kunye neepaki zendalo. Onke amanyathelo asuka kude nohambo olumnandi kumbindi weCuritiba.
Intuthuzelo yendlu yonke elungiselelwe wena kuphela, nge-intanethi engenazingcingo (i-Wifi), i-Smart TV, idesika ejingayo, igumbi lokuhlamba impahla elinewasha/isomisi ngaphakathi kwindlu, ibhodi yoku-ayina/ibhodi yoku-ayina, intambo yokunxiba ephathwayo, isixhobo sokomisa iinwele. I-GARAGE SPACE egqunyiweyo yeemoto ezincinci neziphakathi.
I-condominium inombono wale mihla kwizakhiwo zayo. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwi-ACADEMY enezixhobo, indawo yokubeka ibhayisekile. Amaphepha, ishampoo, isepha kunye nephepha langasese linikezelwa ukuqala kokuhlala kwindawo yokungena; iitawuli, amashiti, iingubo kunye nesomisi iinwele ezikhoyo. Konke oku ngokhuseleko olupheleleyo: 24hrs concierge kunye neekhamera zokhuseleko kwiindawo eziqhelekileyo zesakhiwo.
Indawo enendawo yabucala ye-45m2 ithatha ngokukhululekileyo abantu aba-2. Ixhotyiselwe intuthuzelo yakho ngefenitshala ecwangcisiweyo, i-decor emnandi kakhulu yanamhlanje, kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokuhlala ngokukhululekile kunye noxolo.
Ikhitshi eligcweleyo elinezixhobo zombane, ifriji, isitovu, imicrowave, i-oveni yombane kunye neetafile zegranite; zixhotyiswe ngokupheleleyo: i-thermos, umenzi wesandwich, i-blender, iketile yombane, isitya kunye neseti yokusika, iiglasi zewayini, njl.
Kubalulekile ngamaxesha obhubhane: umoya ophuma kakuhle wendalo oqinisekiswa ziifestile ezinkulu kwigumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala / igumbi lokutyela, iifestile kunye nekhitshi / igumbi lokuhlambela kunye nakwigumbi lokuhlambela.
Ungaphoswa ngumbono omangalisayo kunye nokuphumla kwepaki enemithi usitya isidlo sakusasa kwibalcony enokukhanya kwelanga okuhle kunye neglasi echasene nengxolo. Ungazibona iintaka ezinje ngookhwalimanzi abakhulu abamhlophe kwimiphezulu yemithi yepaki, ngamaxesha athile onyaka nakwisofa enkulu okanye kwibhedi etofotofo yeebhokisi ezimbini. Emva kwemini, yonwabela ishawara elungileyo (enobushushu obuphakathi ngebhoyila, oko kuyenza isebenze ngakumbi. Iikhethini ezimnyama kunye nefeni yesilingi ziqinisekisa ukuphumla okulungileyo.
Bhukha ukuhlala kwakho kwaye uthakathwe; sikulungele ukukwamkela kwaye sinethemba lokuba ukuhlala kwakho kuya kuba mnandi kangangoko kunokwenzeka. Siyafumaneka ngayo nayiphi na imibuzo okanye imibuzo ngencoko ka-Airbnb. Enkosi ngokukhetha kwakho!
Indawo esembindini ejongene neposikhadi yaseCuritiba: Uhambo loluntu! Ipaki yokonwabela indalo, iintaka kunye nezilwanyana epakini IStudio ebukekayo ibekwe kakuhle kumbindi wesixeko, malunga nePasseio Público (enye yeendawo ezikhethekileyo kubakhenkethi). Sisembindini wesixeko esisityebi kwilifa lemveli, iziganeko zenkcubeko, iindawo eziluhlaza, i-gastronomy kunye nokuthenga; imizuzu embalwa kuzo zonke iindawo eziphambili kubakhenkethi: yayingeyiyo Teatro Guaíra Cultural Centre (indawo eekonsathi kunye nemiboniso), UFPR (yokuqala Federal University of Brazil), i-epheleleyo Shopping Müller, Rua XV de Novembro (ekwabizwa ngokuba Rua das Flores, abaninzi iivenkile, ii-snack bars kunye neepatisseries ezikwesi sitrato), iPaço da Liberdade emangalisayo (ikhaya legalari engakholelekiyo kunye necafe), imboniso entle eLargo da Ordem ngeCawe, iZiko leMbali (kunye neekhefi zalo, imivalo, iithiyetha kunye namaziko. yenkcubeko), kunye nayo yonke into oyifunayo ukonwabela iCuritiba ngokupheleleyo! Amanyathelo ambalwa ukusuka kwimarike, iikhemesti, iindawo zokutyela, iibhaka, iipatisseries, iRua Marechal Deodoro (apho iinkampani ezininzi zineeofisi zazo) kunye nezinye iinkonzo.
Imigama esuka kwezinye iindawo zokhenketho:
I-Public Promenade (ngaphambili)
Ithiyetha yaseGuaíra (ibhloko enye, imizuzu emi-2 ngeenyawo)
Santos Andrade Square (ibhloko enye)
I-Mueller yokuthenga (iibhloko ezi-3)
UFPR (iibhloko ezi-3)
Ububanzi beodolo (750 m)
I-Freedom Palace (700 m)
I-Rua XV de Novembro (iibhloko ezi-2)
IMarike kaMasipala (1.6 km)
-I-Curitiba Tourism Line (yeka ibhasi edumileyo ePasseio Público)
-Isikhululo seenqwelomoya (16 km)
-Rodoferroviária (iikhilomitha ezi-2 kuphela, indawo yokuhlala ibhloko enye ukusuka kwisikhululo sebhasi ukuya / ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, phambi kweGuaíra Cultural Centre ePraça Santos Andrade)
-Indawo zokumisa iibhasi, indlela yebhayisekile
I-Apartment ebekwe kwenye yezona ndawo zibalaseleyo zesixeko. Nangona iziko lixakekile, njengawo nawuphi na umbindi wedolophu yasezidolophini, emva kwexesha elithile lobusuku isitrato sithule kakhulu. I-balcony eneglasi kunye nomgangatho ubonelela ngokuzola nasemini.
Umbuki zindwendwe ngu- Davi
Sishiya undwendwe lwethu lukhululekile, siqhuba isheke kwaye sijonge umntu.